MI6 miyaa ka howlgalaya Laascaanood?
Written by gobal on 07 January 2013. Bulshooyinka ku dhaqan Gobolka Sool ayaa dhibaato weyn kala soo gudboonaatay maleeshiyaad ka tirsan sirdoonka Ingiriiska oo lagu soo daadiyay deegaanada gobolkaasi ka dib markii ay cabsi ka qaadeen maddiga Islaamiga ah ee ku soo wajahan deegaanadaasi.
Maleeshiyaad Somaliland ah oo hoos taga sirdoonka dibadda ee Ingiriiska ee loo yaqaano MI6 ayaa ka bilaabay magaalada Laascaanood qafaal iyo dil ka dhan ah dadka waxgalka ah iyo kuwa xiriirka la leh diinta Islaamka.
Hablaha dhowrsan ee deegaanadaasi ayaa ugu badan bartilmaameedka maleeshiyaadkaasi iyadoona ay qafaal iyo dhibaateyn u geysteen dhowr dumar, iyadoona hadda cusbitaalka Laascaanood ay ku jirto gabar ay toogteen.
Maleeshiyaadkan oo isku sheega magaca RRU ayaa ugaarsi ku bilaabay qof waliba oo diintu ka muuqato waxaana ay dhawaantan dalka dibaddiisa u dhoofiyeen dad wali wararkooda ay isi soo tarayaan kuwaas oo loo gacan geliyay sirdoonada cadowga.
Howlaha ceynkani oo kale ah ayaa horseedi doona in dadku ay ka kacdoomaan dulmigooda isla markaana sida reer Muqdisho oo kale ay isaga difaacaan gacan ku dhiiglayaasha cadowga u gacan gelinaya culimada iyo waxgaradka deegaanadaasi.
Sirdoonka cadawga meel walba oo wa sakheysan waa joogaa
ASC waad mahadsantihiin meel walba oo ay ka jiraan maamulada dabadhilifyada ah waa joogaan sirdoonada gaalada sida mi6 iyo cia ilaahey umadad haka qabto,gobolada WG ee manta somaliland loo yaqaan waxaa toos ugumeysta UK iyo Itoobiya	January 06, 2013
MI6 waa joogaan
Horaa loo yiri Murtad Males ka maari maa Mujaahidna Mowlihiis khuwanada somaliland Males iyo Ingiriis ayay ku tiirsanyihiin	January 06, 2013
murdadiinta iyagu shaqakale malahan shaqadoodu waa ashahaado ladirinimo m16 iyo cia dhamaan waa joogaan meeshaas somaliland iyada waabo hooyga jawaasiista soomaalida January 07, 2013
Godane hadduu jihaadkuu sheeganayo daacad iyo sax yahay muu hargaysa ka bilaabo waa meesha Somalia diinta islaamka aad uga fog Diin iyo Ilaah iyo rasuul s.c.w caydooda waa reer waqooyi fuxshi iyo xumaan oo dhan iyagaa ugu horeeya saasoy tahay Sh.Godane hal mar kama hadlo meeshaas markaas timirta laf baa ku jirta January 08, 2013